Kitra: ho fantatra anio izay ho filohan’ny federasiona | NewsMada
Kitra: ho fantatra anio izay ho filohan’ny federasiona
Hifantoka any amin’ny faritra Sava avokoa ny sain’ny mpitia fanatanjahantena rehetra, anio, indrindra fa ny taranja baolina kitra. Hotanterahina any mantsy ny fifidianana ho filoha vaovao hitantana indray ny federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF).
Hana-tantara ity asabotsy 3 novambra ity, eo amin’ny baolina kitra malagasy. Ho fantatra, anio, tokoa mantsy izay ho filoha hitantana indray ny federasiona malagasy (FMF). Araka ny efa notaterina teto, hotontosaina any amin’ny faritra Sava ny fifidianana. Kandidà sivy mirahalahy mianaka ny hiady izany toerana izany.
Handatsa-bato sy hifidy izay hitantana azy ireo ligim-paritra miisa 22 mandrafitra ny federasiona. Betsaka ny sahoan-dresaka manoloana ity fifidianana ity, ampitovian’ny olona amin’ny fifidianana ho filoham-pirenena. Mahasarika ny sain’ny rehetra tokoa ny ho fizotra sy ny fanarahana izany, amin’ity.
Misy ireo voalaza fa kandidàn’ny kaonfederasiona afrikanina (Caf), tarihin’i Ahmad. Io kandidà io izay heverin’ny rehetra fa manana herijika ho lany amin’izany toerana izany. Misy kosa ireo mpifaninana hafa efa naka ny fon’ireo filohan’ny ligy hafa ka voalaza fa niaraka fiaramanidina taminy, nihazo ny faritra Sava. Eo kosa nefa ireo nandresy lahatra ny ligy tamin’ny alalan’ny fandaharanasany.
Maro ihany koa ireo mihevitra fa ao anatin’ireo matanjaka sy mety ho tafaverina amin’ny toerny ny filoha ankehitriny, fototra nahitana ny fahombiazan’ny baolina kitra. Hisy ny fihodinana faharoa, raha toa ka tsy misy mahazo ny antsasa-manilan’ny vato ireo kandidà mpifaninana.
Hiankina tanteraka amin’ny ho safidin’ireo filohan’ny ligy izany ny hoavin’ny baolina kitra malagasy, efa mangetaheta fiovana ihany koa.